Njirimara na nkọwa nke Redmi Rịba ama 10 na Rịba ama 10 Pro | Gam akporosis
Dị ka Xiaomi kwere nkwa, Redmi Note 10 pụtara taa. Usoro ohuru ohuru a mejuputara Ihe Nlereanya 10 na Rịba ama 10 Pro, onye bu nwanne nwoke nke mbu, doro anya.
N'ezie, Mobiles abụọ a na-etu ọnụ maka oke ọnụahịa dị oke ọnụ ahịa nke akara ahụ na, ọbụlagodi, nke ezinụlọ kwuru. Yabụ, anyị nwere njirimara na-atọ ụtọ na nkọwapụta teknụzụ nke kwesịrị ka ọ daba na ndị ahụrịrị na Redmi Rịba ama 9, bụ ndị nwere ọganiihu n'ahịa dịka ọgbọ ndị gara aga.
1 Ihe niile banyere usoro Redmi Rịba ama 10
1.1 Ihe ngosi RedN 10
1.2 Ihe ngosi RedN 10 Pro
Ihe niile banyere usoro Redmi Rịba ama 10
Iji malite, anyị na-eche ihu otu mobiles nwere otu atụmatụ ahụ, nke a na-eduzi site na ngebichi nwere obere ọkụ na oghere na akụkụ nke elu nke ndị a maka kamera n'ihu. N'ime ndị ọzọ, na usoro nke azụ azụ, enwere esemokwu na Redmi Rịba ama 9, nke na-eji sistemụ igwefoto dị na akụkụ nke etiti dị elu, ebe ngwaọrụ ọhụrụ nwere ha n'akụkụ aka ekpe elu.
Ihe ngosi RedN 10
Ugbua na-aga n’isiokwu nke njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke ekwentị ọhụrụ ndị a, anyị hụrụ nke ahụ Ihe ngosi Redmi 10 na-eji ihuenyo teknụzụ AMOLED nke 6.43-anụ ọhịa na-abịa na mkpebi FullHD + nke pikselụ 2.400 x 1.080. Ọ na - egosipụta atụmatụ 20: 9 na ogo izu ike 60 Hz, yana inyekwa akara ngosi mmetụ 180 Hz, nha nha 1.100 kachasị mma - nke mara ezigbo mma - ma na-echebe ya site na Corning Gorilla Glass 3.
Ngwunye ihe nhazi nke na-enye gị ike na ume maka ụbọchị ị bụ Qualcomm Snapdragon 678, nke bụ 11nm ma nwee nhazi octa-isi: 2x Kryo 460 na 2.2 GHz + 6x Kryo 360 na 1.8 GHz. (gbasaa site na kaadi microSD). N'otu oge ahụ, batrị ahụ nwere ikike 5.000 mAh ma kwado teknụzụ na-ebu ọnụ ngwa ngwa 33 W site na ọdụ USB-C.
Usoro igwefoto dị okpukpu anọ. Nke a mejupụtara ihe mmetụta bụ isi nke 48 MP nwere oghere f / 1.79, 8 MP ultra-wide-angle shooter na oghere f / 2.2 na oghere 118 Celsius na abụọ 2 MP macro na bokeh sensọ. Igwefoto n'ihu bụ 13 MP ma nwee oghere f / 2.45.
Akụkụ ndị ọzọ gụnyere stereo okwu, Nkwado Hi-Res Audio, ọdụ ụgbọ mmiri infrared, IP53 nke na-enweghị mmiri, akụkụ akara akara mkpisi aka na gam akporo 11 sistemụ arụmọrụ na MIUI 12.5.
Ihe ngosi RedN 10 Pro
Redmi Rịba ama 10 Pro bụ mkpanaka nke na-eweta mgbanwe ndị dị mkpa, maka ọkọlọtọ Redmi Rịba ama 10 akọwalarị. Nke a na-abịa na ihuenyo buru ibu nke bụ 6.67 sentimita asatọ. Nkà na ụzụ nke panel a bụ AMOLED, ihe na-adịgide otu, ebe mkpebi ahụ bụ 2.400 x 1.080 pikselụ na usoro ngosi bụ 20: 9.
Lee anyị nwere ume ọhụrụ nke 120 Hz, nke bara uru maka igwu egwu, dị ka ọnụego ntinye aka 240 Hz nke ngwaọrụ ahụ na-etu ọnụ. Enwekwara iko iko Corning Gorilla Glass 5, asambodo HDR10 yana ihie kacha dị 1.200 nits.
A na-enye arụmọrụ na nke a site na Qualcomm si Snapdragon 732G mobile ikpo okwu, nke bụ 8 nm ma nwee nhazi octa-isi: 2x Kryo 470 na 2.3 GHz + 6x Kryo 470 na 1.8 GHz. GPU bụ Adreno 618 ma enwere ebe nchekwa 6/8 GB Ram na oghere 64/128 GB nchekwa dị n'ime. Enwekwara batrị 5.020 mAh na ngwa ngwa ngwa ngwa 33 W.
Ihe mejupụtara usoro ihe onyonyo bu ihe mmetụta bụ isi nke 64 MP nwere oghere f / 1.79, Igwefoto obosara nke 8 MP nwere oghere f / 2.2 na oghere ele 118 Celsius, oghere omimi nke 2 MP na mkpuchi 5 MP maka foto macro. Igwefoto n'ihu bụ 16 MP nwere oghere f / 2.45.
Akụkụ ndị ọzọ dị na Redmi Rịba ama 10.
REDMI IHE 10
REDMI IHE 10 PRO
IKIRU 6.43-anụ ọhịa AMOLED FullHD + 2.400 x 1.080 pikselụ / 20: 9 / Corning ozodimgba iko 3 / 1.100 nits max. 6.67-anụ ọhịa AMOLED FullHD + 2.400 x 1.080 pikselụ / 20: 9 / Corning Gorilla Glass 5 / 1.200 nits max. / HDR10
Nhazi Snapdragon 678 Ihe nhazi Snapdragon 732G
Ohere TERLỌ N'IME 64/128 GB gbasaa site na microSD 64/128 GB gbasaa site na microSD
GHARA CAMERAS 48 MP Main (f / 1.79) + 8 MP 118º Wide Angle + 2 MP Macro + 2 MP Bokeh 64 MP Main (f / 1.79) + 8 MP 118º Wide Angle + 5 MP Macro + 2 MP Bokeh
CAMERA N'IHU 13 MP nwere oghere f / 2.45 16 MP nwere oghere f / 2.45
UMUAKA 5.000 mAh na 33 W na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa 5.020 mAh na 33 W na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa
OS Gam akporo 11 na MIUI 12.5 Gam akporo 11 na MIUI 12.5
Atụmatụ ndị ọzọ Side Mount Mkpisiaka Reader / ihu Faceghọta / USB-C / stereo Okwu / Nkwado maka Hi-Res Audio / Infrared Port / IP53 Rating Side Mount Mkpisiaka Reader / ihu Faceghọta / USB-C / stereo Okwu / Nkwado maka Hi-Res Audio / Infrared Port / IP53 Rating
Mbibi na ibu ibu 106.46 x 74.5 x 8.3 mm na 178.8 gram 161.81 x 75.34 x 8.92 mm na 190 gram
Mobiles ndị a enwetabeghị ọnụahịa gọọmentị maka ahịa Europe, dịka e bidoro ma gosipụta ha na India. Agbanyeghị, amaara na ọnụahịa ntọala nke Redmi Rịba ama 10 bụ euro 199,99. A ga-ahapụ ha n’oge na-adịghị anya n’ụwa niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe ngosi Redmi ohuru 10 na Nkọwa 10 Pro amalitelarị na ntanye na 120 Hz na ngwa ngwa nke 33 W
Gluttony Cats clicker bụ ihe nkịtị ị na-anaghị akwụsị iri nri